Vaovao momba ny indostria-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Fitaovana fitsaboana fanjaitra ao an-trano
Fitaovana fitsaboana fanadiovana fahasalamana
Fitaovana fanadiovana rano any an-tanàna
Spotsic Spots, Fanadiovana Fitaovana
Fitaovana fitsaboana fanjaitra indostrialy
Raharaha momba ny indostria
FAQ ho an'ny orinasa
FAQ ho an'ny vokatra
Torolàlana ho an'ny Fandraisana
Home>Vaovao>Vaovao momba ny indostria
Ny tsy fahazoana hevitra sasany momba ny lamina MBR ⑥
Membrane Bioreactor (MBR) dia fitambaran'ny fizotran'ny membrane toy ny microfiltration na ultrafiltration miaraka amin'ny fizotran'ny famafana mihodina, izay ahazoana mpamorona organika ambany be ao anaty rano maloto voadio. Ny rafitry ny membrane dia manova ny rano maloto sy madio avo lenta. Ny dian-tongotra kely amin'ny teknolojia fitsaboana dia ahafahan'ny rafitra miangona ao anaty tontolo voajanahary sy manintona ary mitsabo ny rano maloto ampiasaina amin'ny fanondrahana. Ny vokatra maloto amin'ny fizotran'ny MBR dia ambany dia ambany. Ny kalitaon'ny effluent ao amin'ny MBR dia ambony noho ny effluent ASP mahazatra. Ny effluent avy amin'ny MBR dia azo ampiasaina indray amin'ny fampiharana indostrialy aorian'ny fitsaboana RO (Reverse Osmosis). Ny MBR dia afaka miasa amin'ny MLSS avo lenta kokoa (Mixed Liquor Suspended Solids) raha oharina amin'ny ASP mahazatra (Processing Sludge Activated).
Ohatrinona ny vidin'ny fitaovana fitsaboana ny rano maloto?
Ohatrinona ny vidin'ny fitaovana fitsaboana ny rano maloto? Mino aho fa maro ny mpividy no hanontany an'io ary tena miahiahy momba an'io fanontaniana io. Andao hojerentsika ny tena zava-misy! Fitaovana fitsaboana tatatra maloto
Ny tsy fahazoana hevitra sasany momba ny lamina MBR ⑤
Ny tsy fahazoana hevitra sasany momba ny lamina MBR ④
Ny tsy fahazoana hevitra sasany momba ny lamina MBR ③
Ny tsy fahazoana diso sasany momba ny fomba MBR ②
Adiresy: Xinghe Building No. 100 Zhongxing Rd. Shajing Bao'an Shenzhen